XEERARKA ASAASIGA AH EE SHINNI BADAN - BEEKEEPING
Waxyaabaha ay ka mid yihiin shinni ah ee finan badan - Kiisku wuxuu kaliya u yahay beekhaamiye xirfad leh.
Habkani waa mid la door bido sababtoo ah shaqadiisa.
Ka dib oo dhan, wax soo saarka ee malab sii kordhaya by 3 jeer. Aan aragno sababta.
Noocaan noocaan ah waxaa loo samayn karaa si madaxbannaan. Sida caadiga ah, qoryaha jilicsan ayaa loo qaataa tan, laakiin qoyaanka waa inuusan ka badnaan 8%.
Waa muhiim! Larch ma ahan mid ku habboon kuraasta ay ka helayaan rugta. Marka ay qalalan yihiin, way dili karaan.
Kalluunka ayaa ka kooban 5-7 dhismo (tiradoodu waxay ku xiran tahay xilli-ciyaareedka). Xaalad kasta waxaa ku yaal 10 geesood oo leh cabbir ah 435 × 230. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in miisaankani yahay mid yar oo ay fududahay in lagu kala beddelo. Jidhka laftiisa waxaa lagu sameeyaa qiyaaso 470 × 375 × 240 mm. Dhumucda derbiyada rugta waxay leeyihiin ilaa 35 mm. Naqshadeynta waxaa ka mid ah qeybaha soo socda: kiiska, balaarinta dheellitirka, xadhigga qaybinta, kuraasta saqafka, daboolka, daboolka lafta, hoosta, istaaga, iyo guddiga imaatinka.
Baro naftaada oo dhan sifooyinka sameynta rugta kala duwan.
Naqshadeynta rugta faraha badan waxay ku dhowyihiin xaaladaha dabiiciga ah ee shinnida ku nool. Sidaa darteed, waxay content in ay kor u qaadaan difaaca of bees, rajada nolosha iyo xoog. Nidaam hawo wanaagsan ayaa kaa caawin doonta cimilada kulul. Si xasillan xilliga qaboobaha waxaa si wanaagsan loo ilaaliyaa derbiyada si fiican loo fikiro ama noocyada kala duwan ee rinjiga oo loo isticmaali karo beekeeper.
Xilliga qaboobaha, la shaqee finan yaryar oo adag ayaa sabab u ah heerkulka hooseeya. Nidaamka aan si sax ah loo diyaarin wuxuu keeni karaa geerida gumeysiga shinni.
Kaliya qoysaska xooggan ayaa ka baxaya jiilaalka. Waa in ay ku jiraan 10 geesood oo ku yaal xeryaha. Haddii ay yar tahay, markaa qoysaska ayaa lagu biiri karaa. Xulashada wanaagsan ee qoysaska waa fure u ah jiilaalka raaxada leh. Beesku waa inuu ku jiraa meelo badan. Jirka sare waxaa la dhigaa cuntada carbohydrate. Miiskeeda loo baahan yahay waa ilaa 25 kg. Inta badan ee foomka of feed karbohidratka bixiyaan malab caadiga ah. Isla mar ahaantaana, quudinta leh sharoobada sonkorta waxay siin doontaa shinnida leh cunto wanaagsan. Marka aad diyaarineysid dharka sare, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato sharciyada noocan ah:
sharoobada sonkorta waa inaysan aheyn mid xoog badan;
quudinta goor dambe waxay horseedi kartaa da'da degdeg ah ee beeska;
saliid ama acetic acid waxaa lagu dari karaa sharoobada.
Invert waxaa loo tixgeliyaa quudinta ugu wanaagsan. Tani waa isku dar ah sharoobada sonkorta iyo malab. Xaaladdan oo kale, 40 g oo malab ah ayaa lagu daraa 1 kg sharoobada.
Coriander, jimicsi, jajab, lime iyo phacelia yihiin kuwo aad u dhadhan fiican leh iyo noocyo caafimaad leh oo malab ah, kuwaas oo laga soo ururiyey moolalka dabeecadda laftiisa.
Inta lagu jiro xilliga qaboobaha waxaa suurtagal ah in la xakameeyo dhaqdhaqaaqa kooxda. Si arrintan loo sameeyo, waxaad qaadan kartaa gabal polietylene ah oo ku rid foostada.
Dhismo ballaaran ma aha damaanad qaboojin wanaagsan. Waxaa fiican inaad doorato jir yar.
Ma taqaanaa? Inta badan, shinni ah laguma soo ururin karo rugta ka hor inta suunka, sida gardarrada yar oo dhici karta. Ka dibna qiiq ayaa yimaada badbaadada. Waxay u saameeyaa habka soo socota: shinni waxay bilaabaan inay soo saaraan malab sababtoo ah dareenka khatarta ah, buuxinta calooshooda, oo ma sii deyn karto xanuunka.
Markaad diyaarinayso qoysas xoog leh waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso joogitaanka ilmo yar yar. Iyo qadar ku filan ee roodhida shinni waxay gacan ka geysan doontaa daryeelka ee bees dhalinyarada xilliga jiilaalka, iyo ilmo-galeenka u dhameyn doonaa ukumaha ukunta dambe.
Beekeeping kalluuno badani waxay ku qasban yihiin inay daryeelaan qoysaska daciifka ah. Xilliga jiilaalka, heerkulka gudaha wuxuu gaari karaa 22 ° C. Laakiin si loo beerto daciif ah oo aan la dhicin marka dhalid kuleylka, waxay u baahan yihiin in la isku daro.
Sidoo kale akhri waxyaabaha ku saabsan sifeynta kaydka bilowga ah.
Marka loo diyaarinayo rugta jiilaalka, waxaa kale oo muhiim ah in la diiriyo. Qeybta hoose ayaa lagu dabooli karaa sida balka ama caleemaha. Gawaarida si fiican loo sameeyey waxay ka caawineysaa in ay iska ilaaliso kulaylka maqaarka, maxaa yeelay waxay ka khatar badan tahay barafka.
Sidaas awgeed, waa in kooxdu ku taal meel ka mid ah rugta cuntada.
Shaqada si fiican loo qabtey waxaa ka mid ah finan yaryar ka hor xilliga jiilaalka si loo hubiyo koritaanka ballaaran ee qoysaska guga. Tani waxay sabab u tahay kartida ballaarinta buulka.
Si aad u ballaariso buulka, waxaad u baahan doontaa inaad ku beddesho xayndaabyada - midka sare ee ugu hooseeya, siday u kala horreeyaan, tan ugu sareeysa waxaa ka buuxa rasplod. Kormeerka guga marka dib-u-habeyntu kuu ogolaanayso inaad ogaato xaaladda bees-ka. Xitaa qoysaska xooggan way daciifin karaan, sidaa daraadeed gu'ga waa la isku dari karaa. Waa lagama-maarmaan in la tixgeliyo sababaha dillaacsan ee shinniimada (cudurrada ama waxyaabaha kale ee ka baxsan sida jiir). Nidaamka ballaarinta waxaa la sameeyaa laba jeer.
Waa muhiim! Si aad u nadiifiso qaybta hoose, waxaad u baahan tahay hoosta hoose. Waxaa lagu rakibay heerkulka hooseeya adoo saaraya jeebka.
Xaalad kasta, oo leh rukhsayn sida, ilmo-galeenka ayaa sii deyn doona ukumo badan, iyo shinni ma soo degi doono. Ka dib marka kiiska sare la buuxiyo, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto mid cusub. Waxaa la dhisay inta u dhexeysa kan koowaad iyo kan labaad.
Waxaad sidoo kale jarin kartaa buulka - ku rid sare ee rugta ugu hooseysa, oo ka saar hoose.
Guga, waxaa lagama maarmaan ah in la qalajiyo rugta badan ee jirka sababtoo ah qadarka ballaaran ee condensate. Qoyaanka waxaa lagu yareyn karaa ballaarinta giraanta.
Haddii aad rabto inaad ka hesho sheyga qiimaha qiimaha - wax ka soo duuban qalabka kala duwan, ka dibna akhri sida loo sameeyo rinjirta qorraxda leh gacmahaaga.
Bishii Juun iyo horraantii Luulyo, qoysaska shinni waxay isu diyaariyaan laaluush.
Ilmo-galeenka ayaa loo kala soocayaa giidaada iyadoo la adeegsanaayo mesh keeska hoose. Qeybta labaad ee Juun, dhismayaasha hoose iyo dhismaha waxay bedelaan meelo. Tani waxay lagama maarmaan u tahay cayayaanka, sababtoo ah dhismaha wuxuu ku yaalaa kiiska dhismaha. Goobaha kale waa in lagu kala soocaa iyadoo la isticmaalayo shabakad. Frames waxay daabaceen qashin ku yaal agagaarka shabaqa.
Sidaas farshaxan badan ayaa yeelan doona taxanaha soo socda:
Guryaha leh malab.
Boorow la daabacay.
Dhismaha dhismaha ee rugta.
Iyo inta u dhaxaysa boogta furan iyo daabacan - ilmo galeenka.
Sidaa darteed, shinni ah waxaa laga mashquulin doonaa soo jiidashada, maadaama dhismaha dhismuhu uu ku yaal qulqulka.
Ma taqaanaa? Bees, oo u muuqday xilliyada gu'ga iyo xilliga xagaaga, waxay leeyihiin nolosha ugu gaaban, sababtoo ah waxay ku xisaabtamayaan inta badan shaqada ee ururinta malab. Sidaa darteed, waxay dhaqaalahooda noloshooda si dhaqso ah u qaataan.
Faleebo-xilliga xagaaga waxaa sidoo kale lagu xalliyaa ballaarinta albaabka.
Ka dib laaliskii ugu dambeeyay, diyaar garow xilliga jiilaalka ayaa dhacaya, mana jiraan wax dheeraad ah oo lagu hagaajinayo nadaamka qaybta jirka ah. Dabcan, nadaafadda rugta ayaa la hubiyaa, kormeerka beeska, iyo kiisaska xad-dhaafka ah ayaa laga saaraa. Xilliga dayrta, quudinta degdegga ah ee bees ayaa dhici karta. Waxaa la qabtaa horraantii Sebtembar. Ha ilaawin qawaaniinta kor ku xusan.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee habkani waa korodhka qoysaska iyo tirada malab. Waxaa habboon in la ogaado faa'iidooyinka ka kooban, sababtoo ah waxaa jira aaladda maskaxda iyo aqoonta beekeeper. Qaybaha kala duwan ee beesaha iyo hababka loo yaqaan 'apiculture' oo loo isticmaalo waxay u fiicanyihiin labadaba shaqsiyadeed iyo kuwa warshadaha.
Sidaa darteed, xaaladaha dabiiciga ah ee ay sameeyeen dhismaha fudud ee rugta siin doonaa raaxo bees ah ee xilliga qaboobaha iyo hoy wanaagsan oo ka heer kulka sare ee xagaaga. Waxa ugu muhiimsan waa jiilaal si wanaagsan loo abaabulay. Markaas shinni ah sannadka oo dhan waxay noqon doontaa mid caafimaad leh oo soo saaraan malab badan.